warkii.com » Chelsea Oo Carqaladaynaysa Dabbaal-degga Liverpool Ee Horyaalka Premier League Iyo Qorshaha Lampard
Chelsea Oo Carqaladaynaysa Dabbaal-degga Liverpool Ee Horyaalka Premier League Iyo Qorshaha Lampard
Chelsea ayaa si adag iskugu diyaarinaysa ciyaarta ay Liverpool ku ballansan yihiin Arbacada, kaddib guushii weynayd ee ay ka gaadheen Manchester United oo ay ku garaaceen semi-finalka FA Cup.
Blues ayaa tegi doonta garoonka Anfield oo loo sii qurxinayo in Liverpool lagu guddoonsiiyo koobka horyaalka Premier League ee ay ku guuleysteen, waxaanu Frank Lampard diyaarinayaa qorshihii uu ku qasi lahaa in qaab farxadeed ay Jurgen Klopp iyo xiddigihiisu ugu damaashaadaan Koobka.
Chelsea oo kaashanaysa niyadda wanaagsan ee ay ka heshay guushii ay ka gaadhan Manchester United, waxay u baahan tahay inay guul kasoo gaadho Liverpool si ay booskeeda kaalinta saddexaad usii xajisan karto, laakiin haddii ay khasaare lasoo kulmaan, waxa dhaafi karta Manchester United oo shanaad ku jira, hal dhibicna ka hoosaysa.
63 dhibcood oo Chelsea ay kasoo urursatay 36 ciyaarood oo Premier League ah oo ay ciyaartay, waxay hal dhibic ka horreeyaan Leicester oo farqiga goolasha ugu soo xigta laakiin laga badiyey ciyaarteedii toddobaadkan iyo Man United, waxaanu Lampard ogyahay in haddii uu guul kala soo laaban waayo Anfield in kooxdiisa lagala bixi karo booska saddexaad ee ay hadda ku jirto.
Ciyaartoyda Chelsea ayaa diyaar garow badan ka samaynay kulankan, waxaana xiddigaha niyadda fiican ku tababaranayay ka mid ahaa laacibka guusha ku hoggaamiyey kulankii Red Devils ee Mason Mount.
Dhinaca kale, Liverpool oo intii loo xaqiijiyey inay horyaalka hanteen ay wax iska beddeleen ciyaarahoodii, una muuqda inay farxaddu illowsiisay inay qaab ciyaareedkoodii helaan, waxa ka go’an in maalinta Koobka la guddoonsiinayo ay guul helaan, waana ciyaarta ay ku martigelinayaan Chelsea maadaama kulanka xiga ay marti yihiin.